Paragoay dia heverina ho foiben'ny Amerika Latina. Ny fomba amam-panao teo amin'ny vahoaka teo an-toerana dia niforona teo ambany fitarihan'ny fomban'ny Espaniôla sy ny indizeny, izay efa niaina ela tao amin'ny faritra.
Karazana kolontsaina ao Paragoay
Ny fiteny roa dia ofisialy ao amin'ny firenena: Espaniôla sy Guarani izay miteny amin'ny ankamaroan'ny aborigènes, poety manoratra tononkalo, ary mpanoratra - boky sy tantara.
Ny mponina dia mirehareha amin'ny tantarany sy razambe, noho izany dia miaro ny kolontsainy manokana izy. Misy ivotoerana fikarohana ara-pinoana sy ara-tsiansa maro, ohatra, ny Fikambanan'ny Paraguayan Indiana sy ny Akademia Fiteny sy Kolontsaina Guarani.
Any Paraguay dia efa ho ny 95% -n'ny mponina no mipoapoaka. Misy ihany koa Argentines, Arabo, Shinoa, Japoney, Alemana, Koreana, Italiana izay niaro ny kolontsainy sy ny fiteny. Ny 90% -n'ny mponina no manambara ny Katolika. Ny mpisorona dia mamaha fanontaniana maro, mitantana ny fahamarinana, mitantana ny vondrom-piarahamonina, atokisana amin'ny tsiambaratelony sy ny olany izy ireo.
Ao amin'ny firenena dia maro ny olona miaiky fa mifampitondra am-pilaminana. Any amin'ny faritra maro ao amin'ny fanjakana dia misy fety ara-pivavahana ao an-toerana, izay ankalazaina amin'ny fankalazana ny firenena (Paska, Taom-baovao, Krismasy). Ireo hetsika ireo dia miavaka amin'ny hatsaram-panahiny ary miavaka amin'ny fombafomba manokana.
Fomban-drazana sy fomban-drazana tsy mahazatra any Paragoay
Rehefa tonga any Paragoay ianao, miomàna amin'ny hoe ny olona eto dia mitovitovy amin'ny firenenao:
Ny fifandraisan'ny fianakaviana dia ambonin'ny zava-drehetra: ny mpividy ao amin'ny fivarotana dia tsy afaka mitandrina be amin'ny mpividy ela be, miresaka amin'ny olona amin'ny finday na amin'ny olona, ​​saingy tsy azonao atao ny manafintohina amin'izany, na izany aza, mety ho ireo olona akaiky ireo no mizara vaovao momba ny fianakaviana.
Ho an'ireo vahiny, maro ireo Paragoayana no manahy sy miahiahy.
Ny fifampikasihana eo amin'ny firenena dia mifanakalo olona tsy mahazatra, ary ny manoroka sy mamihina dia mety ho namana akaiky na havana.
Ao amin'ny trano fisakafoanana sy trano fisotroan-toerana ao an-toerana, ny mpivady ihany no manara-maso ireo fitsipika rehetra, ary tsy miezaka mafy izy ireo hanao dite sy kafe eto.
Any Paragoay, tsy misy lozabe sy fisaratsarahana lehibe eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena, satria ny ankamaroan'ny mponina dia taranaky fianakaviana Indiana.
Toe-tsaina manokana ao amin'ny firenena manoloana ireo paradisa, ny safidin'izany dia zary tompon'andraikitra. Izy ireo dia hajaina, sarobidy ary heverina ho mpikambana ao amin'ny fianakaviana.
"Ny sehatra iray manerana izao tontolo izao dia sehatra iray": io teny io dia maneho tanteraka ny toetry ny Aborigènes, satria ao anatin'ny fihetsik'izy ireo dia misy ny tsy fitoviana sy ny fombafomba.
Matetika ny lehilahy iray, amin'ny filazàna vehivavy iray teny mahafinaritra, dia tsy mahatsapa zavatra ho azy, fa izy dia fombafomba fotsiny, ary ny vokatra farany dia tsy zava-dehibe aminy.
Any Paragoay, ny paik'ady miadana, tsy misy olona mahavita na aiza na aiza, ary mahalana vao tonga ara-potoana (mihatra amin'ny mpitarika ihany koa).
Ny fialam-boly mahafinaritra indrindra ao amin'ny firenena dia ny karnavaly , izay ankalazaina isan-taona amin'ny Febroary. Ireo mponina ao an-toerana dia manao fitafiana mamirapiratra, ny fampisehoana tantara an-tsehatra dia mandeha eny rehetra eny, ireo tarika mozika sy dihy.
Aborigines dia sariaka ary vonona ny hanampy ny mpandeha. Na izany aza, tadidio fa mahamenatra ihany koa ny mampahafantatra amin'ny mponina ao an-toerana ny tsy fahalalany, ary aleony manome fanazavana tsy marina satria tsy miaiky fa tsy mahafantatra zavatra izy.
Paragoayana dia mpandala ny nentin-drazana ao amin'ny trano fandroana ary manombatombana ny olona amin'ny fisehoany: fitondra ara-panatanjahantena dia mariky ny fahantrana, ary ny olon-dehibe iray, manao akanjo fohy na skirt, dia ho heverina ho ratsy.
Mandeha any am-piangonana na akanjo fitetezam-paritra ao amin'ny akanjo tsara indrindra ary miova ara-panahy, ohatra, aorian'ny fipoahana voalohany ny lakolosy, na ny mpivarotra amoron-dalana aza dia mitodika any hidalgo miavonavona sy matrons mahery.
Ny fanatanjahan-tena malaza indrindra ao amin'ny firenena, na inona na inona kilasy, dia football. Vitsy dia vitsy ny volleyball sy basketball, ary fifaninanana fiara.
Matetika dia milalao ny harpa sy ny gitara, raha mihira sy malahelo kosa ny mozika, ary ny mozika dia matetika avy amin'ny fiaviana Eoropeana.
Ny "Paganini" any an-toerana dia i Augustin Barrs, izay namorona sy nanatontosa mozika tamin'ny fomba ofisialy Amerikana, nitafy akanjo guarani.
Ny dihy nentim-paharazana ao amin'ny fanjakana dia nalaza tany am-boalohany ary mbola velona, ​​matetika izy io dia ny polka, na ny siny tavoahangy misy sambo eny an-doha.
Ao amin'ny tranombakoka dia matetika no aseho ireo santionan'ny sary hoso-doko tsy mahazatra.
Ny Paraguay dia tia ny lovia vita amin'ny hena vita amin'ny vokatra avy any an-toerana, ohatra, ny cassava sy ny katsaka dia anisan'ny ankamaroan'ny fitsaboana sakafo avy any ivelany .
Tany amin'ny firenena hatramin'ny taona 1992 dia tsy nahay namaky teny ny ampahafolon-karena fahafolo, tao amin'ny tanàna kely dia tsy nisy sekoly. Tamin'ny taona 1995, niova tanteraka ny toe-draharaha, ary 90% n'ny mponina no afaka nahazo fanabeazana.
Fomban-tany hafa any Paragoay
Ny hetsika nentim-paharazana malaza indrindra any amin'ny fanjakana dia ny weaving, izay antsoina hoe nanduti (Ñandutí) ary nadika ho "cobweb". Ity dantam-peo tsara tarehy, vita tanana sy ampiasaina amin'ny karazan-tsivana isan-karazany amin'ny tarehintsoratra rongony, sehatra sy kodiarana. Ny dingana dia asa be dia be, mila herinandro maromaro.
Mbola mampiasa ny zavamaneno nentim-paharazana Indiana izay mbola nalaza talohan'ny nahatongavan'ireo mpanjifany ny mponina. Ireo dia ampongabendanitra, sifotra, mbaraki (fihomehezana), fametavetana, fantsona, harpa sy sodina. Amin'izao fotoana izao dia fehezam-boninkazo no atao amin'ny tarika mozika kely ao anatin'ny antoko. Ny kolontsaina any Paragoay dia tsy misy fetrany ary maro an'isa, mamporisika ny fahalianana avy amin'ireo mpandeha sy ny fiaramanidina miaraka amin'ny hafanam-pony.
Fitiavana amina sigara
Fanomezana fankasitrahana ho an'ny lehilahy
Manamboatra firaisana ara-nofo amin'ny alalan'ny ovulation
Trano fandraisam-bahiny amin'ny tanany manokana
Inona no akanjo fampakaram-bady no mody amin'ny 2015?
Sakafo ara-tsakafo ho an'ny fatiantoka - fitsaboana
Miady amin'ny sifotra ao amin'ny zaridaina
Tartlets misy kavia
Tiako ny lehilahy manambady - inona no tokony hatao?
Tsofy amin'ny tananao izany
Ny fanomezana ny taona vaovao amin'ny tànana manokana
Mitepo ny hozatry ny hozatra - Fisehoana
Jama avy amin'ny mavo mavo
Ny asan'ny vorona amin'ny tanany ihany